Anisany haino aman-jery niasany sy tena nahafantarana azy ny Radio Fahazavana, onjampeon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, Top Radio ao amin’ny vondrona Vidy Varotra, ary ny Radio Vakiniadiana, niasany farany izao izy nodimandry izao.
« Sempotra » izay no nidiran’i Lôlot Ratsimba ny sampana Vonjy Aina tao amin’ny HJRB Befelatanana androany maraina. Nanao ny ezaka sy ala nenina ireo mpitsabo tao saingy tsy tana ny aina fotoana fohy taorian’ny nahatongavany tao.
Isan’ireo mpanao gazety nanaraka sy nampita nivantana ny vaovao manodidina ireo fifampidinihan’ireo ankolafy politika teto Madagasikara sy tany Afrika (Maputo, Addis-Abeba, Gaborone…) sy ireo fifanarahana nandaminana ny olana politika taorian’ny fanonganam-panjakana ny taona 2009 i Lôlot Ratsimba.
Nidirany am-ponja in-droa nisesy ihany koa ny fanatanterahany ny asa maha mpanao gazety azy. Nosamborina tamin’ny raharaha fiokoana miaramila teny amin’ny RAS (Régiment d’Appui et de Renseignement) Ampahibe ny 29 desambra 2009 i Lôlot Ratsimba sy ny Talen’ny Radio Fahazavana, Didier Ravoahangison, tamin’izany, sy ny 20 may 2010 nisian’ny fiaraha-mivavaka nokarakarain’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana na HMF teny amin’ny Mausolée, izay nisamborana ireo mpiasan’ny Radio Fahazavana folo mianadahy, ankoatra ireo Mpitandrina sasany tao amin’ny HMF.
54 taona i Lôlot Ratsimba izao nodimandry izao. Namela mananotena izy sy kamboty mianadahy kely tsy ampy taona.
Hiala ao Befelatanana ny nofo mangatsiakany dia hivantana eny an-tranony eny Nanisana Ambatobe. Tsy mbola voafaritra ny fotoana handevenana azy.